DAAWO SAWIRRO: Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo maanta tagay degmada Waajid ee G/Bakool | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo maanta tagay degmada Waajid ee G/Bakool
DAAWO SAWIRRO: Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo maanta tagay degmada Waajid ee G/Bakool
Waajid (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa isniintii maanta gaaray degmada Waajid ee Gobolka Bakool, halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyay.
Wafdi madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha degmada Waajid si weyn ugu soo dhoweeyay Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo Bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmadaas.
Madaxweyne Laftagareen ayaa u tagay degmada Waajid sidii uu ugu kuurgeli lahaa xaaladaha dadka ku nool degmada iyo baahiyaha ay qabaan,isagoo goob fagaaro ah kala hadlay Bulshada Waajid soo dhoweyntiisa ka dib.
Inta uu madaxweyne Lafta gareen ku sugan degmada Waajid ayaa wuxuu kormeer ku sameyn doonaa xarumaha kala duwan ee maamulka degmada iyo kan gobolka,wuxuuna sidoo kale la fariisan doona Ururada Bulshada rayidka si uu u dhageysto baahiyaha ay qabaan dadka deegaanka.
Madaxweyne Laftagareen oo gaaray Degmada Waajid
Safarka madaxda Koonfur galbeed